Ngo-2016 i-Itali yaseMarmoacc Fair
Umhla: 26, Septemba- 3, Octorber. 2016
I-MARMOMAC sisiganeko esikhokelayo kwihlabathi liphela kushishino lwamatye endalo kwaye imele yonke ikhonkco lonikezelo, ukusuka kwinto eluhlaza ukuya kwiimveliso ezigqityiweyo kunye ezigqityiweyo, ukusuka kulungiso loomatshini kunye neetekhnoloji ekusetyenzisweni kwamatye ...
Ngo-2017 wase-US IBS
I-IBS (i-International Builders Show) eOrlando.
I-IBS 2017 iya kubanjelwa eFreiberg eSaxony. Isixeko ibisisazulu seshishini lezemigodi kangangeenkulungwane kwaye likhaya leBergakademie, iYunivesithi yezemigodi kunye neTekhnoloji esekwe ngo-1765. Imbali yesixeko ...
UMNQOPHISO WETHU NO. L13 kumgangatho wokuqala, kwiholo eyi-12
Umboniso waseTshayina wokuThumela nokuThumela kwelinye ilizwe- iCanton Fair yeyona ntengiso iphambili yase China, intengiso ye canton, imiboniso yorhwebo yase China yalo naluphi na uhlobo kwaye ibanjelwe eGuangzhou (Pazhou Complex). ICanton Fair yeyona ndlela isebenzayo yokuphucula iibhasi ...
Ngo-2017 eDaily Big Fair
Umhla: 26, Novemba-29, Novemba. 2017
I-Big 5 sisiganeko esikhethekileyo esidibanisa imiboniso emihlanu ephambili phantsi kophahla olunye. Ngaphezulu kweenkampani ze-2.000 ezivela kumazwe angama-50 ziya kubonisa kwi-Big 5.One yezona ntengiso ziphumelelayo kurhwebo eDubai, umboniso wezorhwebo wolwakhiwo kunye nocwangciso ...
Intlanganiso rhoqo ye2020 yoMbutho we-E-commerce waseNanchang
Umxholo wale ntlanganiso ibikukuwamkela amalungu amatsha, u-Huang Yu, umphathi jikelele we-Nanchang Monterey Industrial Co, LTD kunye noMongameli we-Nanchang Cross-border E-commerce Association. ...
Umnyhadala wokumiliselwa kwemveliso ye-e-commerce ka-2020
UMontary ubambe inkomfa entsha yokukhutshwa kwemveliso eShenzhen, ngexesha apho kukhutshwa iimveliso ezi-4 kwaye abathengi abangaphezulu kwama-200 bezimase inkomfa.Imveliso yethu entsha itsale inani elikhulu labathengi ...
218 kwi-intanethi Canton Fair
I-Canton Fair yeyona inde kwaye inkulu yokungenisa nokuthumela ngaphandle e-China, ngo-2020, uye wabamba iiseshoni ezili-128 ngempumelelo. ukudibanisa ...